Ndi Nnukwu Onu Na-eso uzo Na-aguta? | Martech Zone
Ndi Nnukwu Onu Na-eso uzo Na-aguta?
Tọzdee, Machị 25, 2010 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ọ bụrụ na m nwere ike itinye ndị debanyere aha 100 ma ọ bụ ndị debanyere aha 10,000 na ntanetị, ọ nwere ike ọ gaghị eme ihe dị iche na akara m. Etosiri m ịdọrọ na nri ndị debanyere aha iji nweta azụmaahịa n'aka ha. Edere m na n'oge gara aga na ahia adighi adi na eyeballs, ọ bụ maka ebumnuche.
Agbanwela m uche m? Mba, ọ bụghị ma a bịa n’ihe gbasara ịkpọsa ngwa ahịa.
Achọghị m ịma banyere ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ma ọ bụ ndị debanyere aha ị nwere, ana m echebara ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ ma ọ bụ ndị debanyere aha ha nwere ọdịmma ma ọ bụ nwere ike ịbụ ndị ahịa m. Ọ bụrụ na ị na-enye ikike ịkpọsa netwọkụ gị, m ga-eme ya ma ọnụọgụ nke ndị na-eso ụzọ ma ọ bụ ndị debanyere aha dị mkpa ziri ezi maka azụmahịa m - ọ bụghị naanị n'ihi na ị nwere nnukwu netwọkụ.
Enwere uru ọnụ ọgụgụ buru ibu, ọ bụ ezie. Ọ bụ nkwalite na ikike.
Enwere ọkụ na nọmba. Ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ dị ala na-eme ka ndị na-eso ụzọ dị obere. Nwere ike ịnwe blọgụ kachasị mma, akaụntụ twitter ma ọ bụ ihu facebook na mbara igwe… mana ọ na-agwụ ike ịgbakwunye ndị na-eso ụzọ mgbe ị nweghị. Ọ bụrụ na ị nwere ndị na - eso 100, ọ ga - ewe izu ma ọ bụ ọnwa iji ruo 200, ọbụlagodi ọdịnaya kachasị mma.
na Ndị na-eso 10,000ma, ị ga-enwe ike ịgbakwunye 100 otu ụbọchị! E nwere ihe abụọ mere:
Nnukwu ọnụọgụ gosipụtara na ị bụ nnukwu ihe. Ama m na nke ahụ bụ ihe nzuzu, mana ọ bụ eziokwu. Ndị mmadụ dị umengwụ… ha na-eleba anya na ibe Twitter gị, ibe Facebook gị ma ọ bụ blọọgụ gị ma ha nwaa ịchọpụta etu ibu ibu. Ọ bụrụ na ị nwere nnukwu ọnụọgụ, ha na-pịa bọtịnụ ndị na-eso ụzọ nke ukwuu. Ọ bụ ihe nwute. Ọ bụkwa ihe mere m ji egosipụta ọtụtụ ogo baajị na sidebar m.
Ọnụ ọgụgụ buru ibu na-enye gị ohere ịkwalite. Ọtụtụ afọ gara aga, emere m ule ebe m mara ọkwa na blọọgụ m enwetala akara dị ka blọgụ ahịa kacha mma na ịntanetị. M mere a ahịa okpuru na-akwalite ya n'ebe nile. Ọgụgụ blog m toro nke ukwuu n'ihi ya. M wee dee post banyere otu m si mee ya.
Elere m ndị ọzọ na-ede blọgụ na-eme ya, kwa. Laa azụ mgbe ị nwere ike mbanye ọnụọgụ nke Feedburn, ahụrụ m ndị na-ede blọgụ nwere mmetụta dị ukwuu na-eji elele zuru oke ma mee ya. Ha blọọgụ ha rịrị elu na ewu ewu - ọ dị ịtụnanya. Atụrụla m azụ n'ịghọ aghụghọ ule nanị (belụsọ na ọ dị mfe nghọta nke ukwuu na m ga-akụziri ndị mmadụ ihe mepụtara ya).
M na-akwado ịghọ aghụghọ ule ka ọ bụ ịzụ ndị na-eso ụzọ? Nke ahụ dị gị n'aka. Agaghị m agwa gị na ọ bụ ihe ọjọọ ma ọ bụ ihe dị mma. Aga m agwa gị na ọ na-arụ ọrụ.
Ana m akwalite ugbu a akaụntụ Twitter m ya na ndi n’egosiputara ya ma tinyekwara otutu ndi neso uzo ohuru. Ọ bụ ọrụ mara mma nke nwere ikike, yabụ anaghị m aghọ aghụghọ ma ọ bụ zụta ndị na-eso ụzọ - Ana m akwalite onwe m. Ebum n’uche m bụ karịa ndị na - eso ụzọ 10,000 n’oge na - adịghị anya.
Otu ndetu na Ndị Ọrụ Apụta: Agaghị m akwụ ụgwọ maka nnukwu Zụrụ otu ugboro ngwugwu n'ọdịnihu. Nkuchi m nabatara ngwa ngwa na mkpọsa ahụ wee daa - ikekwe n'ihi na a na-enye otu ndị ahụ nri ihu ugboro ugboro. M na a na-modifying m ọnọdụ ebe ha nwaa geographically. N'ọdịnihu, echere m na m ga-azụta obere ego nke mgbasa ozi wee mezuo mkpọsa ahụ na nke ha ndenye aha ọnwa.
Puku iri ndị na - eso ụzọ bụ ọnụ ọgụgụ mara mma iji kwalite. Ebe ọ bụ na m na-ede akwụkwọ ga - apụ na Ọgọstụ (Corporate Blogging for Dummies), Achọrọ m ị nweta nọmba m niile - gafee Facebook, Twitter, na ndị debanyere m ndepụta. Wayzọ a netwọk m iji kwalite n’ime ya buru ibu ma enwere m ike iji ya metụ ọtụtụ ndị aka.
Ya mere… ee, ekwenyere m na ọnụ ọgụgụ buru ibu na-agụta!
Tags: guaFans-eso ụzọoleamasịnọmbaechiche
Ego Ndepụta Email, Ihe You Kwesịrị Knowma
Mmasị na-akpali mmasị, daalụ maka ịkekọrịta ya.
Ekwenyere m na gị, ọnụ ọgụgụ buru ibu na-agụta, ọ bụ ezie na nke ahụ anaghị egosipụta azụmaahịa na-aga na saịtị gị. Ọnụ ọgụgụ buru ibu na-enyere aka itinye ndị isi ruru eru karị, ka ìgwè mmadụ nọ ebe ahụ masịrị ha ma dọta ha. Mgbe ahụ ị ga-eme ihe. N'ezie, dị ka ndụmọdụ m ga-atụ aro ka ị jiri ndepụta nke ndepụta Facebook gị. Hazie ndị Fans na ndepụta ka ị mata ndị nwere ike ịre ahịa na ndị na-abụghị.
Ọ bụrụ n’inwee ajụjụ ọ bụla gbasara nke ahụ, ị ​​nwere ike isonye saịtị a http://bit.ly/azEurc ma tinye nchegbu gị ma nweta azịza ọsọ ọsọ site n'aka ndị ọkachamara si ebe ahụ.